နေ့တစ်နေ့တာရဲ့ ဘယ်အချိန်ဟာ အတူတူနေလို့ အကောင်းဆုံးလဲ - Hello Sayarwon
နေ့တစ်နေ့တာရဲ့ ဘယ်အချိန်ဟာ အတူတူနေလို့ အကောင်းဆုံးလဲ
Dr. Thiha Phyo Myint မှ ရေးသားသည်။ 17/08/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ဒီမေးခွန်းကို ဖြေတဲ့နေရာမှာ အမျိုးမျိုး သဘောထားကွဲလွဲနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ ဟိုးအရင်ထဲက ကိုယ့် အကြောင်းပြချက်နဲ့ကိုယ်၊ ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ကိုယ် ငြင်းကြခုန်ကြတာ ယနေ့ထိပါပဲ။ အထူးသဖြင့်တော့ အမျိုးသားထုကြီးနဲ့ အမျိုးသမီးထုကြီးဟာ ဒီနေရာမှာ အကြိုက်က လုံးဝကွဲပြားနေပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေရဲ့ အတူတူနေဖို့ စိတ်အပါဆုံးအချိန်ဟာ အိပ်ရာနိုးနိုးချင်း မနက်ပိုင်း ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးတွေကတော့ အိမ်မှုကိစ္စ အဝဝကို လုပ်ဆောင်ပြီးသွားလို့ နားရတဲ့အချိန်၊ ကလေးတွေကို သိပ်ပြီးချိန်ဖြစ်တဲ့ ညပိုင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ဘာလို့ ဒီလိုမတူကွဲပြားနေရသလဲဆိုတာကတော့ အကြောင်းရင်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကို အပြန်အလှန် နားလည်သဘောပေါက်ပြီး အဆင်ပြေအောင် ညှိယူကြမယ်ဆိုရင် သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၁. ကျားဟော်မုန်း (testosterone)
အမျိုးသားတွေရဲ့ ကျားဟော်မုန်း (testosterone) ဟာ မနက် ၆နာရီနဲ့ ၉နာရီ ကြားမှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျားလိင်အင်္ဂါထောင်မတ်ဖို့ စွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ အားအသန်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နေတာပါ။ ကံမကောင်းတာတော့ အမျိုးသမီးတွေမှာ အဆိုပါ sex hormone ဟာ မနက်ပိုင်းမှာ အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး ညနေပိုင်းလောက်မှ အနည်းငယ်တက်လာတတ်လို့ပါပဲ။
၂. ဟော်မုန်း စက်ဝန်း ကွာခြားမှု
အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့သလိုပါပဲ။ အမျိုးသားတွေဟာ မနက်ပိုင်းမှာတင် သူတို့ရဲ့ တစ်နေ့တာ အတွက် testosterone ဟော်မုန်း ပမာဏရဲ့ ၂၅% ကနေ ၅၀% ထုတ်လုပ်တဲ့ အတွက် အမျိုးသားများမှာ မနက်ပိုင်းမှာ ချစ်တင်းနှောလိုစိတ်ပိုများပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကတော့ နေ့ညအချိန်ပေါ် မူတည်ပြီး ဟော်မုန်း ကွာခြားမှု သိပ်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လတိုင်း ရာသီစက်ဝန်းတိုင်းရဲ့ သားဥကြွေခါနီး ရာသီစက်ဝန်း အလယ်လောက်မှာ sex hormones တွေ မြင့်တက်နေတတ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးအများစုဟာ အတူတူမနေခင်မှာ ကိုယ်လက်သန့်စင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ကာ သူမအတွက် အိပ်ရာနိုးနိုးချင်းမှာ ခံတွင်းအနံ့နံနေမှာ၊ မိန်းမကိုယ်က အနံ့ထွက်နေမှာကို အာရုံရောက်ကြတဲ့အတွက် wake-up sex ကို သိပ်မလိုလားကြပါဘူး။
Morning sex ကို အားပေးချင်လျှင်
ပွေ့ဖက်ထားပြီး စကားစမြည်‌လေးတွေပြောကာ အစပြုပါ။ အမျိုးသားတွေနဲ့ သိသိသာသာ မတူတဲ့အချက်က အမျိုးသမီးတွေရဲ့ desire ဟာ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ပေါ်မှာ မှီတည်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူမရဲ့ သဘာဝအလှကို ချစ်မြတ်နိုးကြောင်း၊ မပြင်မဆင်လည်းလှတယ်ဟုမြင်ကြောင်း ချီးမွှမ်းပြောဆိုပေးနိုင်ပါတယ်။
အိပ်ရေးမဝလျှင် အမျိုးသားမှာရော အမျိုးသမီးမှာပါ testosterone ဟော်မုန်း level ကျဆင်းတတ်ပါတယ်။
Evening sex ကို အားပေးချင်လျှင်
ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ အားကစားပြိုင်ပွဲ ကြည့်ပါ။
သုတေသနတွေအရ အားကစားပြိုင်ပွဲကြည့်ပြီးတဲ့အခါ အမျိုးသားတွေဟာ စိတ်မြန်လာခြင်း testosterone level မြင့်တက်လာခြင်း‌တို့ ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်ကိုက အားကစားဝါသနာရှင် ဖြစ်နေလျှင်တော့ ဒီနည်းက အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
နာရီဝက်လောက် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာ testosterone level ကို မြင့်တက်စေပါတယ်။ အားကစားလုပ်ပြီး နာရီဝက်အတွင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ သွေးသွားလာလည်ပတ်မှု ကောင်းမွန်နေတဲ့အတွက် လိင်စိတ်နိုးကြွဖို့ ပိုမိုလွယ်ကူနိုင်ပါတယ်။
ရာသီလာစဉ်မှာ အတူနေခြင်းက စိတ်ချရလား
မိသားစုနှင့် အတူနေချိန်ကို တိုးမြှင့်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်း ၉ ချက်
ထိုးသွင်းမှုမရှိဘဲ အတူနေခြင်းဟာ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေရှိလား
ကလေးများကို အတူသိပ်တဲ့အတွက် အတူနေဖို့ ခက်ခဲသော မိဘများအတွက် အကြံပြုချက်များ